ဘယ်တော့မှ မကြီးပွားမယ့်လူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက် (၆) ချက်
ဘယ်တော့မှ မကြီးပွားမယ့်သူရဲ့ လက္ခဏာ (၆) ချက်
18 Jul 2017 . 12:28 PM
လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ၂၄နာရီအတူတူရနေပေမယ့် ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွဲပြားနေရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအချက်ကတော့ ငွေကြေးကိစ္စစီမံခန့်ခွဲပုံ မတူညီကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကိုယ့်လစာက ၃သိန်းရတယ်။ တစ်လ၁သန်း စုမိတယ်။ ဗီယက်နမ်ကို အပန်းဖြေထွက်လိုက်တာ ၆သိန်းကုန်သွားတယ်။ ဆိုတော့ ကုန်သွားတဲ့၆သိန်းပြန်ရဖို့ ၆လစုရမယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေက အောက်မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းရှိနေရင် ဘယ်တော့မှမကြီးပွားဘူးဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။
၁။ လုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေမရှိဘဲနဲ့ စုဖို့ပဲအာရုံစိုက်လွန်းတယ်။
ဒီကိစ္စက ရှင်းပါတယ်။ လူတိုင်းက ချမ်းသာချင်တယ်၊ ပိုက်ဆံစုချင်တယ် ဒါပေမယ့် လုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေရှိမှ ဖြစ်မှာလေ။ တစ်လကို ၁သ်ိန်းလောက်ပဲ ဝင်ပြီး ၃သိန်းလောက်စုချင်ရင် ဘယ်ဖြစ်မတုန်း။ အဲဒီတော့ ပိုက်ဆံချမ်းသာချင်ရင် လုံလောက်တဲ့ ဝင်ငွေရှိဖို့လည်း လိုအပ်သေးတယ်။ အရင်ဆုံး ဝင်ငွေကောင်းအောင်လုပ်။
၂။ စုပေမယ့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မရှိသေးဘူး။
ထားပါတော့ ဝယ်ချင်တဲ့ တိုက်ခန်းဈေးက သိန်း၂၅ဝ။ တိုက်ခန်းဝယ်ဖို့ တစ်လကို ၁ဝသိန်းစုတယ်၊ ၂နှစ်ပြည့်တော့ သိန်း ၂၅ဝ ရသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် ဝယ်ချင်တဲ့တိုက်ခန်းဈေးက သိန်း၅ဝဝတက်သွားတယ်။ လိုက်လေ ဝေးလေဖြစ်နေတာ။ တကယ်တမ်းတော့ လစဉ်စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကိုပေါင်းပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို ရင်းနှီးထားသင့်တာ။ ဆိုင်ဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဒါမှပဲ စုထားတဲ့ငွေတွေက တိုးပွားလာမှာ။ အဲဒီတော့ ပိုက်ဆံစုပြီးရင် အရင်းအနှီးရတာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပဲ လုပ်။ လုပ်ငန်းသေးနေလည်း ကိစ္စမရှိဘူး။ ညောင်ပင်ကြီးဆိုတာ ညောင့်စေ့ကပဲ ဖြစ်လာတာ။
၃။ မတတ်နိုင်သေးတာကို ဝယ်တယ်။
လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ဝင်ငွေနဲ့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အသုံးအဆောင်ကိုပဲ ဝတ်ဆင်သင့်တယ်။ ဘီလျံနာတစ်ယောက်က ပြိုင်ကားစီးတာက ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် သိန်း၁ဝဝလောက်ပဲ ချမ်းသာတဲ့သူက ပြိုင်ကားစီးမယ်ဆိုရင် အဆင်မပြေတော့ဘူး။ ကြိုးစားနေတုန်းခဏမှာ တပ်မက်မှုတွေကို ချိုးနှိမ်ထားလိုက်စမ်းပါ။
၄။ သူများဘဝကို အားကျနေတယ်။
ဆရာဝန်လုပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် အဆင်ပြေနေတာ မြင်ရတော့ ကိုယ်လည်း ဆရာဝန်လုပ်ချင်ရော။ အင်ဂျင်နီယာလုပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် ချမ်းသာနေတာ မြင်ရတော့ ကိုယ်လည်း အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်ပြန်ရော။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်ကိုပဲ အကောင်အထည်ဖော်သင့်တာ။
ကိုယ်ဘာဖြစ်သလဲသိအောင်လုပ်၊ ဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်စမ်းပါ။
၅။ ဆင်သေကောင်စားတဲ့ ကျီးမိုက်မဖြစ်စေနဲ့။
လူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ မအောင်မြင်ခင် ကြိုးစားထားမှ တော်ကာကျတာ။ ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်က သူများတွေလို မပင်ပန်းဘူး။ ပညာလည်း ဒီလောက်မရဘူး။ သက်သက်သာသာနဲ့ အချိန်တန်ရင် လစာရတာပဲ။ ဒါကိုပဲ အနေချောင်လို့ သာယာနေရင် အဆင်မပြေဘူး။ အချိန်တန်ရင် ဆင်သေကောင်စားတဲ့ ကျီးမိုက်လိုပဲ ဖြစ်သွားမှာ။ ဘယ်တော့မှ ရေသာမခိုလေနဲ့။
၆။ ဝယ်ချင်တာ ဝယ်ပြီးမှ စုနေတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဝင်ငွေရဲ့ ၃၅ရာခိုင်နှုန်းလောက် အနည်းဆုံးထားပြီး စုသင့်တယ်။ လစာထုတ်ရင် ဝယ်ချင်တာကို ဝယ်တယ်။ ပိုတဲ့ပိုက်ဆံကိုမှ စုဆောင်းတယ်ဆိုရင် နည်းနည်းပဲစုဖြစ်မှာပါ။ လစာထုတ်ကတည်းက ဘယ်လောက်စုမယ်လို့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသင့်တယ်။
ကဲ . . . လူဆင်းရဲတွေမှာရှိတဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို တက်နိုင်သလောက် စုတည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုဖော်ပြထားတဲ့အချက် (၆) ချက်က ကိုယ့်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင် အချိန်မီသာ ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါ။ နောက်ကျသွားရင် မကောင်းဘူးနော်။ ကဲ . . . အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေ။
ဘယျတော့မှ မကွီးပှားမယျ့သူရဲ့ လက်ခဏာ (၆) ခကျြ
လူတဈယောကျခငျြးစီမှာ ၂၄နာရီအတူတူရနပေမေယျ့ ဆငျးရဲခမျြးသာ ကှဲပွားနရေတဲ့ အဓိကအကွောငျးအခကျြကတော့ ငှကွေေးကိစ်စစီမံခနျ့ခှဲပုံ မတူညီကွတဲ့အတှကျဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ- ကိုယျ့လစာက ၃သိနျးရတယျ။ တဈလ၁သနျး စုမိတယျ။ ဗီယကျနမျကို အပနျးဖွထှေကျလိုကျတာ ၆သိနျးကုနျသှားတယျ။ ဆိုတော့ ကုနျသှားတဲ့၆သိနျးပွနျရဖို့ ၆လစုရမယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့။ ကိုယျ့မှာရှိတဲ့အကငျြ့စရိုကျတှကေ အောကျမှာဖျောပွတဲ့အတိုငျးရှိနရေငျ ဘယျတော့မှမကွီးပှားဘူးဆိုတာ ပွောခငျြပါတယျ။
၁။ လုံလောကျတဲ့ဝငျငှမေရှိဘဲနဲ့ စုဖို့ပဲအာရုံစိုကျလှနျးတယျ။
ဒီကိစ်စက ရှငျးပါတယျ။ လူတိုငျးက ခမျြးသာခငျြတယျ၊ ပိုကျဆံစုခငျြတယျ ဒါပမေယျ့ လုံလောကျတဲ့ဝငျငှရှေိမှ ဖွဈမှာလေ။ တဈလကို ၁သိနျးလောကျပဲ ဝငျပွီး ၃သိနျးလောကျစုခငျြရငျ ဘယျဖွဈမတုနျး။ အဲဒီတော့ ပိုကျဆံခမျြးသာခငျြရငျ လုံလောကျတဲ့ ဝငျငှရှေိဖို့လညျး လိုအပျသေးတယျ။ အရငျဆုံး ဝငျငှကေောငျးအောငျလုပျ။
၂။ စုပမေယျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု မရှိသေးဘူး။
ထားပါတော့ ဝယျခငျြတဲ့ တိုကျခနျးဈေးက သိနျး၂၅ဝ။ တိုကျခနျးဝယျဖို့ တဈလကို ၁ဝသိနျးစုတယျ၊ ၂နှဈပွညျ့တော့ သိနျး ၂၅ဝ ရသှားပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဝယျခငျြတဲ့တိုကျခနျးဈေးက သိနျး၅ဝဝတကျသှားတယျ။ လိုကျလေ ဝေးလဖွေဈနတော။ တကယျတမျးတော့ လစဉျစုထားတဲ့ ပိုကျဆံတှကေိုပေါငျးပွီး လုပျငနျးတဈခုခုကို ရငျးနှီးထားသငျ့တာ။ ဆိုငျဖှငျ့ထားတာပဲဖွဈဖွဈပေါ့။ ဒါမှပဲ စုထားတဲ့ငှတှေကေ တိုးပှားလာမှာ။ အဲဒီတော့ ပိုကျဆံစုပွီးရငျ အရငျးအနှီးရတာနဲ့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးပဲ လုပျ။ လုပျငနျးသေးနလေညျး ကိစ်စမရှိဘူး။ ညောငျပငျကွီးဆိုတာ ညောငျ့စကေ့ပဲ ဖွဈလာတာ။
၃။ မတတျနိုငျသေးတာကို ဝယျတယျ။
လူတဈယောကျက ကိုယျ့ဝငျငှနေဲ့ သငျ့တငျ့လြောကျပတျတဲ့ အသုံးအဆောငျကိုပဲ ဝတျဆငျသငျ့တယျ။ ဘီလြံနာတဈယောကျက ပွိုငျကားစီးတာက ပွဿနာမဟုတျပမေယျ့ သိနျး၁ဝဝလောကျပဲ ခမျြးသာတဲ့သူက ပွိုငျကားစီးမယျဆိုရငျ အဆငျမပွတေော့ဘူး။ ကွိုးစားနတေုနျးခဏမှာ တပျမကျမှုတှကေို ခြိုးနှိမျထားလိုကျစမျးပါ။
၄။ သူမြားဘဝကို အားကနြတေယျ။
ဆရာဝနျလုပျနတေဲ့ လူတဈယောကျ အဆငျပွနေတော မွငျရတော့ ကိုယျလညျး ဆရာဝနျလုပျခငျြရော။ အငျဂငျြနီယာလုပျနတေဲ့ လူတဈယောကျ ခမျြးသာနတော မွငျရတော့ ကိုယျလညျး အငျဂငျြနီယာဖွဈခငျြပွနျရော။ လူဆိုတာ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျပါ။ ကိုယျပိုငျအိပျမကျကိုပဲ အကောငျအထညျဖျောသငျ့တာ။
ကိုယျဘာဖွဈသလဲသိအောငျလုပျ၊ ဖွဈအောငျ အကောငျအထညျဖျောစမျးပါ။
၅။ ဆငျသကေောငျစားတဲ့ ကြီးမိုကျမဖွဈစနေဲ့။
လူ့ဘဝတဈလြှောကျလုံးမှာ မအောငျမွငျခငျ ကွိုးစားထားမှ တျောကာကတြာ။ ထားလိုကျပါတော့ဗြာ။ ကိုယျလုပျတဲ့အလုပျက သူမြားတှလေို မပငျပနျးဘူး။ ပညာလညျး ဒီလောကျမရဘူး။ သကျသကျသာသာနဲ့ အခြိနျတနျရငျ လစာရတာပဲ။ ဒါကိုပဲ အနခြေောငျလို့ သာယာနရေငျ အဆငျမပွဘေူး။ အခြိနျတနျရငျ ဆငျသကေောငျစားတဲ့ ကြီးမိုကျလိုပဲ ဖွဈသှားမှာ။ ဘယျတော့မှ ရသောမခိုလနေဲ့။
၆။ ဝယျခငျြတာ ဝယျပွီးမှ စုနတေယျ။
ဖွဈနိုငျရငျ ဝငျငှရေဲ့ ၃၅ရာခိုငျနှုနျးလောကျ အနညျးဆုံးထားပွီး စုသငျ့တယျ။ လစာထုတျရငျ ဝယျခငျြတာကို ဝယျတယျ။ ပိုတဲ့ပိုကျဆံကိုမှ စုဆောငျးတယျဆိုရငျ နညျးနညျးပဲစုဖွဈမှာပါ။ လစာထုတျကတညျးက ဘယျလောကျစုမယျလို့ ကွိုတငျသတျမှတျထားသငျ့တယျ။
ကဲ . . . လူဆငျးရဲတှမှောရှိတဲ့ အကငျြ့စရိုကျတှကေို တကျနိုငျသလောကျ စုတညျးဖျောပွထားပါတယျ။ အခုဖျောပွထားတဲ့အခကျြ (၆) ခကျြက ကိုယျ့မှာရှိနတေယျဆိုရငျ အခြိနျမီသာ ဖြောကျပဈလိုကျပါ။ နောကျကသြှားရငျ မကောငျးဘူးနျော။ ကဲ . . . အားလုံးအဆငျပွခြေောမှကွေ့ပါစေ။
by Ju Jue . 56 mins ago